Arda Turan tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Home TAFIKA ASIA FOOTBALL Arda Turan tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'El Turco'. Ny Arda Turan tantaram-pahaterahana bebe kokoa miaraka amin'ny tsiambaratelo tsy fantatra Ny zava-misy marina momba ny biôgrafia dia mitondra ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Raha tsy misy adieu, aleo manomboka.
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Tany am-piandohana
Arda Turan teraka tamin'ny 30 Janoary 1987 tany Istanbul, Torkia ho an'i Mr Adnan Turan (Ray) sy Yuksel Turan (Reny). Nihalehibe izy ary tsy nanana raki-pahalalana ary tsy nahalala izay ho toetrany na izay ho avy eo amin'ny fiainany.
Tsy dia fakan-tahaka ihany koa ny firaketana an-tsekoly an'i Arda. Tany am-piandohan'ny zatovo dia sahirana izy tany am-pianarana ary matetika no hita tamin'ny fotoana tsy nahitan'ny mpitantana ny sekoly. Ireo olana ara-pitsipi-pahaizana izay nanapa-kevitra ny handeha hianatra dia tsy miantso azy. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny baolina kitra no zavatra tokana noeritreretiny.
Neken'ny ray aman-dreniny ny fanapahan-kevitr'i Arda hiditra amin'ny baolina kitra. Nandray andraikitra haingana izy ireo tamin'ny fanapahan-keviny ka nanoratra haingana azy tao amin'ny academy football tany Istambul.
Fantatry ny ray aman-dreniny fa ny fahatakarana ny zanany dia iray amin'ireo zavatra tena manan-danja tokony hianarany ho ray aman-dreny tsara.
Izy ireo dia nanampy sy nahomby tamin'ny fitarihana sy ny fikarakarana an'i Arda rehefa nihalehibe izy. Arda tamin'ny vanim-potoana dia namolavola toetra tena manan-danja izay manondro ny baolina kitra ary mitoetra ho tsy miovaova amin'ny androm-piainany hatramin'izao.
Rehefa nihalehibe ny talentany, dia nanampy bebe kokoa ny ray aman-dreniny. Ny fomba tsara indrindra hahatonga azy ho sambatra dia ny haka azy hividy azy. Hividy zavatra izay tiany izy ireo. Niaro azy tamin'ny zavatra rehetra izay mety hisakana ny nofinofiny. Ny tsara indrindra dia mandinika azy matory, mihinana ary milalao ny lalao mahafinaritra.
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
ny Ray: Mr Adnan Turan dia lehilahy tia fihavanana izay tena mahazo aina amin'ny fivarotana varotra eo an-toerana ao amin'ny distrikan'i Bayrampaşa ao Istanbul.
Tsaroany foana ny anjara asany nomeny ny zanany teo amin'ny lalany. Tsy toy ny an'i Yuksel vadiny izy, fa tsy mifangaro amin'ny asan'ny zanany.
Mother: Yuksel dia renin'i Arda. Tena niboridana izy izay fantatra fa tsara indrindra amin'ny fiarovana ny zanany ao anatin'ny fifandirana.
Niaro haingana ny zanany lahy izy nandritra ny hetsika fiaramanidin'ny ekipa nasionaly izay nanafihan'ny zanany lahy Arda ny mpanao gazety Tiorka Bilal Meşe.
Araka an'i Yüksel Turansaid, "Nanomboka ny fampielezan-kevitra ho an'ny zanako lahy.
Ny renin'i Arda Turan, Yüksel Turan, nilaza hoe, "Arda dia olona tena tsara ary amin'ny ankapobeny misy olona tsy te handrava olona, ​​dia nahomby tamin'ny fahombiazany fa tsy misy mpilalao baolina kitra ao amin'ity firenena ity, mandoa ny vidiny izy amin'izao ... Miezaka mamita ny zanako lahy miaraka amin'ny lynch ! Nanoratra aho fa tsy nanam-bintana ny zanako fa sarotra ny tsy hamaly azy ireo. " Manome toerana ho an'ny fanehoana.
rahalahy: Rahalahy Okan Turan Arda.
Okan dia nahazo ny Oniversite (BSc) avy amin'ny Fakan-tserasera Teknolojika tao Istanbul, Aeronautical and Astronautical Faculty tao amin'ny 1989 sy ny Master's degree (MSc) avy amin'ny University Technical University, ny Fakiolten'ny Fitantanana, ny Fitantanana ny Fitantanana ao amin'ny 1992. Okan nanomboka ny asa aman-draharahany amin'ny sehatry ny tsenam-bola ho an'ny Financial Analyst ao amin'ny Data Securities Co. ao 1992 ary niasa ho Filoham-bola Financial Analyst hatramin'izao.
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Relationship Life
Miranda Shelia ary Arda Turan efa niara-nanohana hatramin'ny Dec 2016. Modely Georgiana no ilay sipa vao haingana toy ny tamin'ny fotoana nanoratana.
Aslian Dogan (hita etsy ambany) dia ilay sipany taloha nataon'i Arda Turan. Teraka tamin'ny Desambra 4, 1985 izy ary miteny anglisy sy Turkish. Nanomboka tamin'ny 2014 i Aslian sy Arda ary nifarana tamin'ny Desambra 2016. Samy nifanakaiky avokoa ireo fetra ireo.
Aside Aslian, Arda Turan dia nanana fifandraisana 5 hafa nandritra ny taona. Ny fiainam-piarahamonin'i Arda Turan amin'ny famintinana dia midika anarana 6. (1) Dilara Oztunç (Dated from 2007 - 2008), (2) Sinem Kobal (Dated from 2012 - 2013) (3) Selin Imer (Daty tamin'ny 2012) (4) Idil Firat (Daty tamin'ny 2013) (5) Aslihan Dogan (Daty tamin'ny 2014) (6) Miranda Shelia (2017).
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Mihevitra izy fa Pop Star
Nandritra ny fialan-tsasatry La Liga tamin'ny ririnina, dia nanapa-kevitra i Tryan mba hanandrana sy hanao azy ho kintana pop. Nody tany Torkia izy mba hihira ny 'The Voice'. Nanao hira iray antsoina hoe 'Sari Cizmeli Mehmet Aga' izy - tononkira rock malaza Tiorka, ary, andeha hojerentsika fa tokony hifikitra amin'ny baolina kitra izy. Mbola nanodidina ny sezany fotsiny ireo mpitsara mba hahitana hoe iza no vahiny tafahaona manokana.
Arda Turan tantaram-pahazotoana momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-Miala tsiny amin'i Michael Jordan sy Roger Federer
Ny mpilalao baolina kitra malaza dia heverina ho sary avy amin'ny olona maro indrindra any Torkia. Saingy i Arda Turan dia manana sehatra izay misy fanatanjahan-tena hafa. Mpilalao baolina kitra Roger Federer sy ny sarimihetsika Basketball Michael Jordan dia atleta heveriny ho.
Tamin'ny resadresaka iray dia nilaza izy hoe: "Miezaka foana aho manatsara, ny mpilalao mendrika indrindra sy ny vehivavy dia miezaka foana ny ho tsara kokoa. Izany no mahatonga an'i Michael Jordan sy Federer ho sariko. "
Ireo angano roa ireo dia fantatra fa tsy ny fahaiza-manaony sy ny fahaizany ihany no ahafantarana azy ireo fa ny fahasoavany sy ny maha izy azy. Ireo mponin'i Turan dia namaritra azy ho olona tsara fanahy sy tsara fanahy izay mahatsapa ny zavatra inoany.
Arda Turan tantaram-pahazotoana momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-Fitiavana fiara
Araka ny tatitry ny Turkish Tur, dia efa nanana Aston Martin DB9 ary Mercedes-Benz SLS AMG.
Manana fiantraikany amin'ny fiara izy amin'izao fotoana izao ary mitondra azy Audi RS6. Tamin'ny Janoary 2009, nirotsaka an-tsokosoko izy Istanbul. Soa ihany fa tsy naratra mafy i Turan ary nanohy ny fiofanana amin'ny fako sy ny mangana.
Arda Turan tantaram-pahazotoana momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-Lozam-pifamoivoizana
Tamin'ny 16 Novambra 2008, nilatsaka i Turan nandritra ny fifaninanana tamin'i İstanbul BB.
Taorian'ny nidirany tao amin'ny toeram-pitsaboana, dia voan'ny aretin-koditra izy. Ny ampitson'io zava-nitranga io, nanambara ireo dokotera fa salama tsara i Turan ary nahatonga ny areti-mifindra ho ritra be izany. Tamin'ny novambra 2009 dia nizaka ny gripan-kisoa kely izy saingy naverina tao anatin'ny andro vitsivitsy mba hanohy ny fiofanana.
Vao haingana, efa fantatry ny Turk ny ratra vao haingana. Ireo andro ireo, ny lohaliny na ny tongotra. Raha ny marina, raha naratra ny tenany tamin'ny lalao nanohitra ny mpampiasa azy amin'izao fotoana izao, dia nandao ny tanimbary niaraka tamin'ny ranomaso izy.
Na dia eo aza ny ratra ara-batana dia fantany fa mpiady izy. Matetika no heverina ho toy ny mpilalao amin'ny olona tsy miteny hoe ny fihetsiketsehana. Ny toetra iray izay tsy mora ny manatona, fa tena sarobidy ho an'ny mpilalao baolina.
Arda Turan tantaram-pahazotoana momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-Mitovy ny fitoviana amin'i Leonidas
Ny fitovian'ny tsy firaharahiana eo amin'ny sarimihetsika malaza, Gerard Butler AKA Leonidas avy ao 300 sy Arda Turan dia nametraka ny aterineto tamin'ny tafio-drivotra. Ny nahalalan'ny olona rehetra dia ny fisian'ny sarin'ny fiakaran'ny sahan'ny Arda izay nifanaraka tsara tamin'ny an'i Leonidas.
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Nanonofy ny hilalao an'i Liverpool
Ny mpilalao dia matetika fantatra amin'ny filazany ny fitiavany ny klioba manokana. Ny sasany dia manana ny tombony amin'ny filalaovana ny olon-tiany raha tsy misy ny sasany.
Arda Turan dia an'ny sokajy farany. Niverina tao amin'ny Euro 2008, nanambara ny fitiavany an'i FC Barcelona i Andrey Arshavin. Indrisy anefa fa tsy nifototra ny fihetsika. Tao amin'ny 2011, Turan, avy eo nilalao ho Galatasaray ihany koa dia naneho ny fitiavany ireo Anglisy ambony Liverpool. Hoy izy: "Raha mbola miresaka foana aho, dia manintona ahy i Liverpool noho ny fomban-drazana.
"Any Eoropa, mpanohana an'i Liverpool aho, koa raha mandeha any Eoropa aho, te-hilalao aminy."
Nilaza izy fa nofinofiny ny hilalao ny Reds of Merseyside. Na izany aza, tsy niantso an'i Liverpool intsony i Liverpool. Nataon'i Atletico Madrid sy nanaraka ny fanararaotany an'i Diego Simeone teo am-pelatanana izay nitondra azy tany amin'ny lohatenin'ny La Liga sy ny Ligin'ny Champions ofisitra dia nifindra tany Camp Nou izy izao. Ny toa an'i Liverpool no nahavoafidy azy dia azo antoka fa ny harena tao Barcelone.
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Indray mandeha ny boot amin'ny mpitsara
Na dia ohatra tsara aza izy tamin'ny fampisehoana baolina teo amin'ny kianja, dia nanjary nalaza tamin'ny fomba goavana i Teman, tato ho ato, nanipy ny booty tamin'ny andian-jiolahim-boto tao amin'ny "Copa del Rey" an'i Atletico tao Barcelone tamin'ny lasa.
Na izany aza, tsy izy no mpilalao farany ambony indrindra hamoy ny lohany.
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Lehilahy iray manana fo Golden
Fantatr'i Arda fa manana fo volamena. Vao haingana izy no nandray anjara tamin'ny fifaninanana fiantohana tany Ejipta mba hanangonam-bola ho an'ny trano fitaizana zaza kamboty tany amin'ny tontolo Arabo. Tamin'ny taon-dasa, nilalao lalao fiantrana tany amin'ny tranony taloha (Izmir Ataturk Stadium) izy mba hanangonam-bola ho an'ny fianakavian'ireo niharam-boinan'i Soma.
Fantany manokana ny fanampiana ireo ankizy marary. Tamin'ny volana 2014, izy dia voatendry ho Ambasadaoro Goodwill ho an'ny vonomoka Khojalay izay mifandray amin'ny famonoana sivily atsy Aostraliana 161. Ny asany dia ahitana ny fanentanana ny saina sy ny fampiroboroboana ny fandriampahalemana erantany.
Izy koa dia lehilahy mpianakavy. Tamin'ny karapanany voalohany, nividy trano ho an'ny ray aman-dreniny izy ary vao haingana dia nividy fiara ho an'ny rahalahiny, tsy fiara iray fotsiny, Porsche.
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -A Socialist
Nosokafan'i Arda Turan indray mandeha ny trano any Madrid amin'ny olona manerana ny sehatra politikan'ny tanàna. Ny toerana dia ampiasaina ho an'ny adihevitra sy adihevitra. Ny Turan tenany ihany dia sosialista ary fantatra amin'ny fomba hikarakarana ny olona rehetra ao an-tokantrano amin'ny fomba iray mitovy tsy misy fananana sy asa.
Nihalehibe tao amin'ny faritry ny sekoly ambaratonga faharoa tao Istanbul izy ary nandany ny làlany tany am-piandohana. Ny fotoan-tsarotra nandritra ny fahazazany sy ny olana atrehan'ny kilasy mpiasa dia nisy fiantraikany teo amin'ny fiainany. Tamin'ny resadresaka iray no nilazany, "Manohana hatrany ny zon'ny mpiasa aho, ny zon'ny olon-tsotra."
Fitsangatsanganana ara-politika tanteraka no nandova an'i Turan tamin'ny taranaka nifandimby. Niala tamin'ny foto-pisainana niorina ny rainy, ny raibeny dia mpanohana ny politika havanana.
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Football Career
Nanomboka nilalao baolina tao Bayrampaşa i Turan. Raha vao 12 izy dia niaraka tamin'i Galatasaray tao amin'ny 2000 izay niaviany. Izy no nanao ny lahateniny matihanina niaraka tamin'i Galatasaray tao amin'ny 2006 taorian'ny fizaran-taona dimy nilalao tao amin'ny ekipan'ny tanora. Tsy dia io rosy io foana. Ny tanora tanora marefo dia sahirana amin'ny fiatrehana ny firoboroboan'ny baolina kitra isan'andro, tsy ny kely indrindra ny haingam-pandeha sy ny tanjaka takiana amin'ny lalao. Arda no mpilalao fohy tao amin'ny tarika 1987 taonany, ary nampiseho izany tamin'ny fampisehoana voalohany. Mpilalao lehibe sy matihanina kokoa tao amin'ny ligy dia tsy nifankahazo tamin'ny mpilalao iray izay nanana ny tricks rehetra saingy tsy nahomby.
Izy no nandray anjara voalohany tamin'ny ekipa nasionalista Tiorka tamin'ny Aogositra 2006. Turan dia nilalao ho an'i Tiorka voalohany indrindra nanohitra an'i Luxembourg tamin'ny fifaninanana nahafinaritra izay nahazo an'i Torkia 1-0.
Tamin'ny vanim-potoanan'ny 2006 / 07, nanjary iray tamin'ireo mpilalao tena nilaina indrindra tao Galatasaray i Turan. Nametraka ny loha laharana voalohany amin'ny liginy amin'ny 2008 izy. Ny klioba Espaniola Atletico Madrid dia nibata azy ho an'ny 12 tapitrisa euros tamin'ny volana 2011. Tamin'ny fahatanorany voalohany tao Atletico Madrid, nandresy ny Ligy Eoropeana sy ny Super Cup UEFA i Turan. Ny laharam-pon'ny Atletico 10 dia nandray anjara lehibe tamin'ny fandresena tamin'ny ligin'ny ekipany nandritra ny vanim-potoanan'ny 2013 / 14. Tamin'io vanim-potoana io ihany, i Atletico Madrid dia nahafeno ny fe-potoana farany ho an'ny Champions League tamin'ny taona 40. Ny Star Turan, Turan, no namono ny tanjona 22 ary nanampy tamin'ny 32 ny lalao 177 tao anatin'ny fofom-bolana efa-taona tao Atletico Madrid. Miaraka amin'ny vidin'ny fandoavam-bola 34 tapitrisa Euro, ny fanasoniavana vaovao dia nanjary mpilalao sarobidy indrindra amin'ny tantara Tiorka.
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Mpanao gazety iray
Ny fisotroan-drononon'i Arda Turan avy ao amin'ny ekipa nasionalin'i Tiorkia dia nambara taorian'izay fa mitifitra mpanao gazety iray amin'ny sidina ekipa.
Nolazaina fa izy dia nanana fifandonana ara-batana sy ara-batana niaraka tamin'ny mpanao gazety nandritra ny fiaramanidina taorian'ny fanehoana hatsaram-panahin'i Makedonia noho ny filazana fa efa vita ny fanomezan-tsiny an'i Turan noho ny fametrahana tsy fitoviana eo amin'ny ekipa amin'ny vola.
Araka ny Reuters, Niaiky i "Turan" fa "nanao fahadisoana" ary nandao ny ekipany nasionaly.
"Nanao fahadisoana aho rehefa nanao ny fanamiana ekipa nasionaly. Zavatra tsy tokony ho nitranga teo amin'ny fiaramanidin'ny ekipa nasionaly izany, " hoy izy.
Araka ny gazety anglisy The Independent, niseho tao amin'ny fiaramanidina ekipa nankany Italia ny zava-nitranga raha nilaza fa nanatona an'i Bilal Meşe tamin'ny famoahana tiorka i Turan Milliyet. Ity no lazain'ny The Independent momba ny fifanakalozana:
"Lazao amiko Bilal Meşe, teo ve ianao?" Dia nanomboka izy. "Moa ve ianao niaraka taminay rehefa nanoratra momba ny olana momba ny bonus? Iza no nangatahako vola? Iza no nanontany ahy noho ny bonus? Lahateny. Eo moa. Iza no nahatonga anao hanoratra ireo tatitra ireo? "Nolazain'i Turan tao Meşe, mpanao gazety vetaveta iray izay nanamarina ny mpitaingina Turan noho ny ankamaroan'ny tsindry hazandrano.
Ary hoy ny filazan'i Turan fa efa nialoha ny tatitra dia nanamarika fa tokony hosakanan'ny mpiara-miasa izy rehefa nisintona ny tendany i Meşe. Nanambara i Arda Turan fa tsy mahatsiaro fanenenana izy ary tsy hilalao an'i Torkia intsony. Mendrika ny hanamafy fa samy namana tsara izy ireo, araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Arda Turan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -LifeBogger Biography Rankings
Fantatra amin'ny ankamaroan'ny baolina baolina izy, ny fahaiza-manaony ary ny fahitana. Manolotra ny fombam-pahaizana momba ny biôgraphie eto ambany isika.
Ronald Koeman Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra